EBay एकीकरण - Propars ई-निर्यात संग eBay मा बेच्नुहोस्
तपाइँको Ebay.com स्टोर व्यवस्थापन Propars संग सजिलो छ!
Propars संग EBay मा बिक्री शुरू, र तपाइँको उत्पादनहरु 24 बिभिन्न देशहरुमा बेचिनेछ!
यो Propars ईबे एकीकरण संग 24 देशहरु लाई ई निर्यात गर्न धेरै सजिलो छ!
ईबे बाट तपाइँको आदेशहरु तपाइँको सबै अन्य आदेशहरु संग एकै पर्दा मा एकत्रित गरीन्छ।
तपाइँ एक एकल क्लिक संग eBay मा Propars लाई जोड्ने उत्पादनहरु बेच्न सक्नुहुन्छ।
इबे, जुन पहिलो अनलाइन मार्केटप्लेस हो, अझै पनि विश्वको सबैभन्दा ठूलो बजारमा छ। लगभग हरेक देश र वर्गमा बलियो बजार साझेदारी भएको इबे अटो स्पेयर पार्ट्स र औद्योगिक उत्पादनहरू जस्ता केही वर्गहरूमा अग्रणी छ। यो एक स्थान हो जुन तपाईंले निश्चित रूपमा आफ्नो उत्पादन समूह र लक्षित देश अनुसार मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।
ई-वाणिज्यमा हरेक सम्भावित प्लेटफर्ममा हुनु तपाईंको व्यवसायको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। Ebay एक ई-वाणिज्य व्यापार को लागी एक हुनै पर्छ प्लेटफर्म हो। लाखौं ग्राहकहरू र प्लेटफर्महरू जहाँ तपाईं विदेशी विनिमय दरहरूमा बेच्न सक्नुहुन्छ, यसले व्यवसायहरूलाई उत्कृष्ट अवसर प्रदान गर्दछ।
Propars eBay एकीकरण संग 26 देशहरूमा बेच्नुहोस्
EBay 26 विभिन्न देशहरूमा सक्रिय छ। यी देशहरूको मातृभाषाले सेवा प्रदान गर्दछ र ती सबैमा प्रमुख प्लेटफर्महरू मध्ये एक हो।
Propars 2016 देखि Ebay को समाधान साझेदार भएको छ। Ebay को ग्लोबल इकोसिस्टममा बिक्रेता बन्न, Propars एकीकरणले तपाईका सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ। निस्सन्देह, समर्थन बिना 26 विभिन्न देशहरू र स्टोरहरूमा बेच्न सम्भव छैन। जे होस्, Propars को साथ, तपाइँ तपाइँको अन्य अनलाइन स्टोरहरु संग एउटै प्यानल मा तपाइँको सबै eBay स्टोरहरु को व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो प्यानलमा भाषा समर्थनबाट पनि लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईं स्वचालित रूपमा आफ्ना सबै स्टकहरू र अर्डरहरू व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले आफ्नो मातृभाषामा Propars मा दर्ता गर्नुभएका उत्पादनहरू देशको मातृभाषामा अनुवाद गरिन्छ जहाँ तिनीहरूलाई बिक्रीको लागि राखिनेछ र प्रकाशित गरिनेछ। थप रूपमा, तपाईंका उत्पादनहरूको मापन एकाइहरूलाई 26 विभिन्न देशहरूमा प्रयोग गरिएको मापनको स्थानीय एकाइहरूमा रूपान्तरण गरिन्छ, र तपाईंका सम्भावित ग्राहकहरूले उत्पादनहरूलाई तिनीहरूको मापनको आफ्नै एकाइहरूमा प्रदर्शन गर्छन्।
सजिलै आफ्नो भुक्तानी प्राप्त गर्नुहोस्
विशेष गरी टर्कीबाट Paypal को फिर्ता पछि, Ebay मा बेच्ने वा बेच्ने इरादा गर्ने व्यवसायहरू कठिन प्रक्रियाबाट गुज्रिएका छन्। तर आजका दिनहरु धेरै पछाडि छन् । Payoneer जस्ता भुक्तानी सेवाहरूको साथ, तपाईंले सजिलैसँग आफ्नो स्टोरमा रहेका भुक्तानीहरू टर्कीमा रहेको आफ्नो बैंक खाताहरूमा स्थानान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले आफ्नो बैंक खातामा विदेशी मुद्रा वा TL मा स्थानान्तरण गर्नुहुने रकमहरू छोटो समयमा र कम कमिसन दरहरूमा स्थानान्तरण हुन्छन्।
तपाइँले तपाइँको Payoneer खाताको लागि Propars टोलीबाट सहयोग प्राप्त गरेर छूट प्राप्त कमीशन दरहरू र विभिन्न सुविधाहरूबाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। Propars टर्की मा Payoneer को समाधान साझेदार हो। यदि तपाइँसँग Payoneer सँग खाता छैन भने, यसले तपाइँको खाता खोल्न र तपाइँको Ebay स्टोरमा तोक्न अनुमति दिन्छ।